Arcaea - New Dimension Rhythm Game 2.1.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.1.0 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
ဂိမ္းမ်ား ဂီတ Arcaea - New Dimension Rhythm Game
Arcaea - New Dimension Rhythm Game ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
နယူး Dimension Rhythm ဂိမ်း
Touch ကို, ဂျပန်ကနေနှင့်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအနှံ့အနုပညာရှင်တွေ featuring တစ်စိန်ခေါ်မှု, မမေ့နိုင်သော Arcade-စတိုင်စည်းချက်ဂိမ်းအတွေ့အကြုံကိုမှတဆင့်ကျင်းပရန်နှင့်ရစ်သမ်မှဆလိုက်။
3-ရှုထောင်အတွေ့အကြုံသစ်အမှတ်တံဆိပ် '' Arc '' ဂိမ်း: အရစ်သမ်မှပွတ်ဆွဲခြင်းနှင့်အောက်ပါင်း၏ကန့်သတ်ရန်သင့်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကိုယူပြီး။
အားလုံးသီချင်းတွေကိုဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုအပေါ် playable!
ကစားရန်အခမဲ့နှင့် paid နှစ်ဦးစလုံးသီခငျြးမြားရရှိနိုင်ပါ! လွတ်လပ်စွာအများအပြားသီချင်းတွေကိုမဆိုအချိန် play အဖြစ် Arcaea-သီးသန့်မူရင်းသီချင်းတွေကိုသော့ဖွင့်။
- တစ်ဦးကမြင့်မားတဲ့အခက်အခဲမျက်နှာကျက် - သငျ Arcade-စတိုင်တိုးတက်မှုအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှုနှုန်းကိုတွေ့ကြုံခံစား
- တခြားဂိမ်းကိုဖြတ်ပြီးကျော်ကြား 50 ကျော်အနုပညာရှင်တွေထဲကနေ 90 ကျော်သီချင်းများ
-3ရစ်သမ်အခက်အခဲတိုင်းသီချင်းအဆင့်ဆင့်
- အကြောင်းအရာ updates များကိုတဆင့်တစ်ဦးကိုတိုးချဲ့ဂီတစာကြည့်တိုက်
- အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေများနှင့် scoreboards
ယခု Download နှင့်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကဂီတဂိမ်းအတွေ့အကြုံကိုတွေ့ကြုံခံစား!
လူငယ်နှစ်ဦးမိန်းကလေးငယ်များက၎င်း၏ဟောင်းတဦးမိမိကိုယ်ကို၏အကြွင်းအကျန်များနှင့်ပြည့်နှက်နေတဲ့ကျိုးကမ်ဘာပျေါတှငျလှည့်လည်: Arcaea ။
Arcaea မိန်းကလေးမှထွက်မခေါ်သောအတိတ်၏ melodic shards ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီမှသာတစ်ဦးသို့မဟုတ်အခြားခြင်းဖြင့်ကြုံတွေ့ခံရဖို့ရွေးချယ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, မိန်းကလေးများကသူတို့ကိုရှေးခယျြသော Arcaea အတွက်ရှေ့နောက်မညီသတိထားမိကြောင်းတစ်ချိန်ကဖြစ်သကဲ့သို့ကမ္ဘာကြီးကိုအကြောင်းကိုပဋိပက္ခဖြစ်အမြင်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စတင်။
Arcaea & သတင်းကိုလိုက်နာပါ:
Facebook မှာ: http://facebook.com/arcaeagame
Google+ မှာ: https://plus.google.com/100125201589035673885
Arcaea - New Dimension Rhythm Game အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Arcaea - New Dimension Rhythm Game အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Arcaea - New Dimension Rhythm Game အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Arcaea - New Dimension Rhythm Game အား အခ်က္ျပပါ
universal-store စတိုး 448 864.85k
Arcaea - New Dimension Rhythm Game ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Arcaea - New Dimension Rhythm Game အခ်က္အလက္
Release date: 2019-06-25 12:48:45
လက်မှတ် SHA1: 58:24:88:34:7C:F6:53:65:84:93:86:46:31:52:03:CA:3E:2D:18:5A
အဖွဲ့အစည်း (O): low.moe
Arcaea - New Dimension Rhythm Game APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ